Izindaba - Ukukhanya kwe-UV kusebenza kanjani
I-UL ibhale ama-Filament Bulbs
Swag elengayo zezimboni lig ...
Isihloko se-UL ES 20, Isihloko 24 an ...
I-Vint Retro vint entsha ...
Ngaphambi kokuphendula lo mbuzo ake ubone ukuthi yini i-UV Lighting.
Okokuqala, ake sibuyekeze umqondo we-UV. I-UV, noma i-ultraviolet, noma i-ultraviolet, ingamagagasi kagesi anebanga eliphakathi kuka-10nm no-400nm. I-UV yama-wave band ehlukene ingahlukaniswa nge-UVA, UVB ne-UVC.
I-UVA: ubude bamaza bude, buphakathi kuka-320-400nm, obungena phakathi kwamafu nengilazi egumbini nasemotweni, futhi bungangena esikhaleni sesikhumba, lubangele ukushiswa yilanga. I-UVA ingahlukaniswa nge-uva-2 (320-340nm) ne-UVA-1 (340-400nm).
I-UVB: ubude besilinganiso buphakathi, phakathi kuka-280-320nm. Izongenelwa ungqimba lwe-ozone, lubangele ukushiswa yilanga nokubomvu kwesikhumba, ukuvuvukala, ukushisa nobuhlungu. Ezimweni ezimbi kakhulu, amabhamuza noma ukuxebuka kuzokwenzeka.
I-UVC: ubude bamandla buphakathi kuka-100-280nm, kepha ngoba ubude obungaphansi kwe-200nm buyi-vacuum ultraviolet, bungangena emoyeni, ngakho-ke ubude be-UVC obungawela umkhathi buphakathi kwama-200-280nm, amafushane futhi ayingozi kakhulu i-wavelength ingukuthi, kodwa ngoba ingavinjelwa ungqimba lwe-ozone, inani elincane kuphela elizofinyelela ebusweni bebhola lomhlaba.
Isebenza kanjani i-UVC kwenzalo
I-UV ingabhubhisa ukwakheka kwamangqamuzana kwe-DNA (Bacilli) noma i-RNA (Virus) yama-microorganisms, futhi yenze amabhaktheriya afe noma angakwazi ukuzala kabusha, ukuze kufezekiswe umgomo wokuvala inzalo.
Ngakho Impendulo inguYebo.
I-UVC Lighting ingabulala iCovid-19
Isibani seMercury UVC nesibani se-UVC se-LED
Ngokomlando, isibani se-mercury bekuwukuphela kwendlela yokukhetha inzalo ye-UV. Kodwa-ke, iMinamata Convention on mercury iqale ukusebenza eChina kusukela ngo-Agasti 16, 2017. Isivumelwano sidinga ukuthi ukukhiqizwa, ukungeniswa nokuthunyelwa kwamanye amazwe kwemikhiqizo enemikhiqizo eshiwo eSivumelwaneni kuzovinjelwa kusukela ngoJanuwari 1, 2021, futhi isibani se-mercury naso sizovunyelwa. ukufakwa ohlwini lapha. Ngakho-ke, asisekho isikhathi esiningi sesibani se-mercury, futhi i-UVC LED ukuphela kwendlela enokwethenjelwa.
Isikhathi Iposi: Jan-05-2021